Riwaayadda sci-fi ee Apple TV 'Duullaan' ayaa soo qaaday xilli labaad | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Riwaayadda sci-fi ee Apple TV ' Duullaan' ayaa soo qaadaysa xilli labaad
Riwaayadda sci-fi ee Apple TV ' Duullaan' ayaa soo qaadaysa xilli labaad
Waxay u tahay xoogaa toddobaad ah cusboonaysiinta Apple TV+, waxay u muuqataa. Iyadoo la raacayo ciribtirka cusboonaysiinta taxanaha qarsoon ee anthology Run Sheeg xilli saddexaad, Apple ayaa sidaas oo kale u samaynaysa bandhigeeda duullaanka shisheeye, sidoo kale.
Apple ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u cusbooneysiisay taxanaha riwaayadaha sci-fi duulaankii xilli labaad. Oo waxay u dhigantaa koorsada adeegga qulqulka, sidoo kale, maadaama ay siisay cusbooneysiinta xilli ka hor inta uusan xilli-ciyaareedka ugu horreeya si rasmi ah u xirmin. Ku dhawaaqista maanta waxa kale oo ku jira xilliga ugu dambeeya ee taariikhda hawada ee xilliga ugu dambeeya ee Jimcaha, Janaayo 10, 2021. Markaa, haddii aad ilaa hadda la socotay sheekada, waxaad ogaan doontaa goorta ay arrimuhu soo dhammaan doonaan (ugu yaraan hadda).
duulaankii wuxuu ka yimid Abaalmarinta Akadeemiyada iyo Emmy Abaalmarinta Simon Kinberg (Martianiyo David Weil (Ugaarsatada).
Kinberg waxa uu lahaa tan ku saabsan cusboonaysiinta:
Waxaan si qoto dheer ugu mahad naqayaa Apple sida ay u garab taagan tahay tallaabo kasta oo jidka ah, oo nagu kalsoon tahay inaan samayno sheeko duullaan shisheeye oo qoto dheer oo bini'aadmi ah. Inta badan waxaan u mahadcelinayaa taageerayaasheena cajiibka ah, kuwaas oo la'aantood aanan fursadan u helin inaan sii wadno duulaanka. Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa aan qorsheyneyno xilliga labaad, oo aan ku ballaarineyno koonkeena siyaabaha ugu dhow iyo kuwa ugu xiisaha badan.
duulaankii waa sheeko dhowr qodob ka kooban, oo ka sheekaynaysa duulaanka shisheeyaha ee dhinacyo kala duwan ka eegaya aduunka oo dhan. Waxaa jilaya Sam Neill (Jacka ParkShamier Anderson (Dhaawacmay, Toos) waxaa wada jilaya Neill, oo uu la wado Golshifteh Farahani (Saarista), Firas Nassar (Khiyaanada), iyo Shioli Kutsuna (Deadpool 2). Xilligii ugu horreeyay wuxuu lahaa 10 qaybood.
Ma jiro eray ku saabsan goorta aan bilaabi karno daawashada xilli ciyaareedka 2, dabcan. Laakin, ilaa iyo inta wax soo saarku ku socdo si dhib la'aan ah, waxaan daawan karnaa ku dhawaad ​​dhamaadka 2022, rajo.
Ma hubisay duulaankii? Hadday haa tahay, miyaad rajaynaysaa xilli labaad?
Wallet Apple hadda waxa ay taageertaa furayaasha qolka dhijitaalka ah ee huteelada Hyatt ee la xusho
macOS Monterey 12.1 waxa ay ku shubtaa dallacado waaweyn, trackpad iyo dhiqlaha YouTube